Dood Golaha Wakiilladu ka yeeshay Ajandaha kalfadhigiisa oo ku hafatay khilaafka ka taagan dhoofka xoolaha | Somaliland.Org
Dood Golaha Wakiilladu ka yeeshay Ajandaha kalfadhigiisa oo ku hafatay khilaafka ka taagan dhoofka xoolaha
July 26, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Golaha Wakiillada Somaliland oo maanta gudagalay doodda Ajandaha kalfadhigiisa 7aad ayaa ku haftay khilaafka xiisadda leh ee ka taagan ganacsiga xoolaha oo ay mudanayaashu si kulul uga hadleen.
Kalfadhiga Golaha Wakiillada oo furmay horraantii toddobaadkii dhammaaday, balse fadhiyadiisu u qabsoomi kari waayeen kooramka oo buuxsami waayey ayaa fadhigii maanta shirguddoonku soo hordhigay ajande ka kooban Afar qodob oo ay ka mid yihiin: Ansixinta Xeerka Golaha horyaalla, Xeerarka Guurtida ku maqan, Ansixinta Heshiisyada caalamiga ah iyo wixii soo raaca, kaas oo Shirguddoonku ugu talagalay in goluhu ka doodo, si wax loogu kordhiyo ama wax looga saaro. Hase yeeshee, mudanayaal door ah ayaa saluug ka muujiyey qodobada ajandaha, kuwaas oo dalbanayey in ajandaha loogu horraysiiyo ganacsiga xoolaha nool ee khilaafku ka taagan yahay. Waxaana ka mid ahaa xildhibaanada ugu kulkulaa dooddan xubno hore muxaafid u ahaa xukuumadda Daahir Riyaale oo difaaci jirey.
Xildhibaan Ibraahim Mahdi Buubaa oo ka soo baxay xisbiga UCID, Gobolka Hargeysa, ayaa ka mid ahaa xildhibaanada sida kulul uga hadlay ajandaha, isaga oo ku guubaabiyey Golaha inuu tallaabo ka qaado Daahir Riyaale iyo maamulkiisa oo uu ku tilmaamay mid xadhkaha goostay.
Waxa kale oo ay mudanayaashu aad uga hadleen sicir bararka maceeshadda iyo wax ka qabasho la’aanta xukuumadda.
Doodda ajandaha ayaa sii socon doonta maalmaha soo socda.
Dhinaca kale, wadahadalo u socda xukuumadda iyo ganacsatada xoolaha ee ka soo horjeedda heshiiska Daahir Riyaale kootada ugu xidhay dhoofka xoolaha maalqabeenka Carbeed ayaan weli xal-kama-dambays ah lagu gaadhin, inkasta oo la dejiyey xiisaddii, isla markaana la siidaayey Guddoomiyihii guddida ganacsatada xoolaha.
Afhayeen u hadlay guddida ganacsatada ayaa xalay saxaafadda u sheegay in wadahadaladu ay u socdaan iyaga iyo xukuumadda, welina aanay heshiis ka gaadhin in la dhoofiyo xoolahooda dekedda jooga. Balse, waxa uu sheegay inay isku afgarteen in khilaafka wadahadal lagu dhammeeyo.